Global Voices teny Malagasy » “Vahoaka izahay, tsy vitsy an’isa izahay, ary manana fimaroan-karazana ara-nofo izahay.” · Global Voices teny Malagasy » Print
“Vahoaka izahay, tsy vitsy an'isa izahay, ary manana fimaroan-karazana ara-nofo izahay.”
Voadika ny 05 Jona 2018 4:54 GMT 1	 · Mpanoratra Dayana Aguilar Nandika Miranah
Ny Tetikasa Reframed Stories dia mangataka amin'ny olona mba hamaly ireo lohahevitra manjaka amin'ny fitantaram-baovao miresaka ny vondrom-piarahamonina misy azy. Ireny tantara ireny dia eritreritry ny olona izay matetika isoloan'ny hafa tena ao amin'ny fampitam-baovao. Noforonina ny zavon-teny mampiasa ny sehatra Media Cloud, fitaovana fanadihadiana lahatahiry izay mikaroka angona media amin'ny fotoana iray manokana, afaka mandinika sy mifanakalo hevitra ny santatry ny fijery amin'izay anehoana azy ireo ao amin'ny fampitam-baovao ny mpandray anjara. Mitandrina tsara ny tetikasa mba tsy hanao fehinkevitra maimaika momba ny lahatahiry, fa io kosa no fiaingana miteraka sehatra hifanakalozan-kevitra amin'izay azon-dry zareo atao hamolavolana ny fampitam-baovaon-dry zareo manokana amin'ny alàlan'ny media nomerika.
Dayana Aguilar dia mpikambana ao amin'ny El Punto Collective  ao Quito, Ekoadoro. Ity manaraka ity dia dika an-tsoratra tamin'ny lahatsary momba ny fanadihadian'i Dayana amin'ny zavon-teny manondro ny voambolana, “LGBTI ” (lesbiana, pelaka, mpiray amin'ny lahy sy vavy, mpanova taovam-pananahana, ary intersex) ao anatin'ny tokotanin-tsehatra Ekoadaoreana.
Ireo voambolana manjaka avy amin'ny lahatsoratra 222 nivoaka tanelanelan'ny Janoary 2017 ka hatramin'ny Avrily 2018 hita nanonona “LGBTI” ao anatin'ny angona Media Cloud 2 amin'ny sehatra fampitam-baovao miteny espaniola ao Ekoadaoro. (Mijery sary lehibe kokoa )
Inona ny zavon-teny nahasarika ny sainao indrindra?
Nanadihady ity voambolana ity izahay ary nahita fa nametraka lohahevitra sasany ny media, tahaka ny fitakian-jo, tolona sy herisetra. Misy ny antony ilainay ireo zo ireo, saingy tsy miresaka momba ireo olana lehibe hafa ny fampahalalam-baovao, tahaka ny fivarotan-tena, tahaka ny herisetra (mihatra amin'ireo mpivaro-tena), ary tahaka ny fanilikilihana sy ny fankahalana pelaka.
Rehefa nanadihady ny (zavon-teny) izahay, nahita voambolana sasany, ankoatra ireo (voalaza etsy ambony), sy ny fikatrohana koa. Mihevitra izahay fa misy ireo fomba hafa hanombohana ny resaka momba ny lohahevitra LGBTI.
Araka ny zavon-teny, ahoana ny fisehoan'ny LGBT ao amin'ny fampitam-baovao?
Voambolana izay tokony hodinihana lalina izany, ary tsy mipoitra ao anatin'ity zavon-teny ity izany. Tsy hita ihany koa ny voambolana “fikatrohana”, izay milaza amintsika fa misy ao anatin'ny fikambanana ny tolona, saingy tsy hita ho fitakiana ara-tsosialy, tsy hita ho hetsika ara-politika, fa ao amin'ny fitakian-jo ihany ireo no hita.
Ahoana no tokony hisehoan'ny vondrom-piarahamonina LGBTI amin'ny fampitam-baovao?
Eo indrindra, (ny fampahalalam-baovao dia tokony hiresaka ny) fahazoana (fitsaboana) fahasalamana, fepetran'ny asa manaja ny maha-olona, ny fampianarana, fa eo koa ny zo hivezivezy am-pilaminana eny amin'ny toeram-bahoaka, sy ny zo hanana feo eo amin'ny fampahalalam-baovao, izay zavatra tsy mitranga. Matetika ny fampahalalam-baovao nentin-drazana mitady hifantoka amin'ireo mpiantsehatra manokana, saingy ao amin'ny resaka izay mahaliana azy ireo (media) hisandratana.
Inona ireo voambolana tokony [hiaraka] amin'ny zavon-teny “LGBTI”?
Voalohany, (tokony hampiseho ny zavon-teny) fa vahoaka izahay, tsy vitsy an'isa izahay; manana fimaroan-karazana ara-nofo izahay rehetra. Ny olana dia mieritreritra ny (fampitam-baovao) fa ireo vondrona manokana ihany no mihevitra ireo zo ireo satria izy ireo no hany tsy manana izany, saingy tsy izany; miantraika aminay rehetra ireo karazana resaka ireo. Noho izany antony izany, avy amin'ny vondrom-piarahamonina no nahatakaranay fa na inona na inona mitranga amiko, mitranga aminao koa izany, lasa zatra (ny tsy fisian'ny zo) izahay ary izay no mahatonga azy ireo tsy heverina fa zava-dehibe intsony.
Ao anatin'ny andiana Rising Frames norafetina tamin'ny fiarahamiasa akaiky amin'ny fikambanana El Churo  ao Quito, Ekoadaoro ity lahatsoratra ity. Nikarakara atrikasa notontosaina tamin'ny 21 Aprily 2018 izy ireo izay nampitambatra ireo solontena avy amin'ny fikambanana sy vondrona samihafa mba hanadihady ny lohahevitra lehibe amin'izy ireo sy ny fomba hisehoan'izy ireo sy izany lohahevitra izany amin'ny angona media Ekoadaoreana sy hamorona tantara ho setrin'izany.
Belén Febres-Cordero no nifanampy tamin'ny fandikan-teny, izay nasiam-panovana mba hazava kokoa sy ho fohy kokoa.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/06/05/120718/